भारतबाट आलु आयत नभएपछि नेपालको आलुले राम्रो मूल्य पायो ! – News543Online
March 28, 2021 adminLeaveaComment on भारतबाट आलु आयत नभएपछि नेपालको आलुले राम्रो मूल्य पायो !
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट आउने आलु बन्द हुँदा यो वर्ष सल्यानमा उत्पादित आलुले राम्रो मूल्य पाएको छ । विगतका वर्षहरूमा १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आइरहेका किसानले यो वर्ष भने ३५ देखि ५५ रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री गरेको बागचौर नगरपालिका– १२ बाफुखोलाका टीका केसीले बताइन् । सल्यानका आलु बढी मात्रामा पोखरा, दाङ, बुटवल जाने गरेको छ । खेतबारीमै पुगेर खरिदकर्ताले आलु लिएर जाने गरेकाले बजारको समस्या नभएको आलु खेती गर्दै आएका अगुवा कृषक चित्रबहादुर वलीले बताए । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट आउने आलु बन्द हुँदा यो वर्ष सल्यानमा उत्पादित आलुले राम्रो मूल्य पाएको छ । विगतका वर्षहरूमा १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आइरहेका किसानले यो वर्ष भने ३५ देखि ५५ रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री गरेको बागचौर नगरपालिका– १२ बाफुखोलाका टीका केसीले बताइन् । सल्यानका आलु बढी मात्रामा पोखरा, दाङ, बुटवल जाने गरेको छ । खेतबारीमै पुगेर खरिदकर्ताले आलु लिएर जाने गरेकाले बजारको समस्या नभएको आलु खेती गर्दै आएका अगुवा कृषक चित्रबहादुर वलीले बताए । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट आउने आलु बन्द हुँदा यो वर्ष सल्यानमा उत्पादित आलुले राम्रो मूल्य पाएको छ । विगतका वर्षहरूमा १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आइरहेका किसानले यो वर्ष भने ३५ देखि ५५ रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री गरेको बागचौर नगरपालिका– १२ बाफुखोलाका टीका केसीले बताइन् । सल्यानका आलु बढी मात्रामा पोखरा, दाङ, बुटवल जाने गरेको छ । खेतबारीमै पुगेर खरिदकर्ताले आलु लिएर जाने गरेकाले बजारको समस्या नभएको आलु खेती गर्दै आएका अगुवा कृषक चित्रबहादुर वलीले बताए
नेपाली सेनाका जवानले सुत्केरी महिलालाई रगत दिएर जोगाए ज्या,न
कति प्रतिशत नेपालीले पत्याउँछन् प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा ? भोट गर्नुहोस
जापानले बनायो बिश्वभरको कोरोना एकैपटक नष्ट गर्न सकिने ग्यास र खाेप : विश्वभर बाट बधाईको ओइरो